29inch Magetsi anobatsira bhasikoro gomo | ebike Shuangye
musha Products electric bike electric mountain bike 29 * 2.35 inch magetsi anobatsira bhasikoro gomo revakuru A6AH26
Mota: 36V 250W / 350W Hub Motor
Bhatiri: 36V 10Ah Lithium Battery
Ratidza: LCD3 Screen
Gear: SHIMANO 21 Magiya
Bhureki: Kumberi & Kumashure 160mm Discs
Tiro: Offroad 29 * 2.35 inch
Mafuta Mutoro: 120-150kgs
29 * 2.35 inch magetsi anobatsira bhasikoro gomo revakuru
29 inch wheel magetsi kubatsira bhasikoro gomo rakakodzera vanhu varefu, ivaite kuti vatasire zvakanaka. Yepakati pekare makomo egomo bike chimoto match yeht yakavanzwa bhatiri inoshuvira inoita kutaridzika kwese kwemagetsi gomo bike rakafanana neyakajairwa gomo bike. Kunyangwe zvimwe, kune 6 Pedal Rubatsiro Rubatsiro (kubva pamatanho kusvika pamashanu) kuti ugadzirise kwakasiyana mhanyisa kune zvaunoda iwe uchikwira munzira kana kukwira.
250W / 350W brushless mota iri kupfuura 80 muzana kunyatsoita uye pazasi 60 Db ruzha, Nakidzwa nerunyararo kutasva chiitiko hakusi kurota. Yekumhanyisa mhanyisa mota mota inokwanisa kupa bhasikoro kusvika 25km / h-30km / h. Mota ita kuti bhasikoro rako riite mbiri dzinofamba munzira-yekufamba senge yakajairika bhasikoro uye rakachena magetsi anofamba aine throttle.
Yakavanzika bheti dhizaini kuti yemagetsi ibatsire bike pazere kutaridzika kutaridzika. Yakagadzirwa ne 36v 10ah lithium bhatiri senge magetsi, kutasva 40-60km haisi dambudziko. Kubvisa basa kwakanyanya nyore, bvisa bhatiri nyore uye utore kuchaja kune chero nzvimbo (pamba kana hofisi). Maawa matanhatu chete ma5-6 anogona kupedzisa kudaja yakazara neiyo 42V 2A charger yakapihwa.
Multi-inoshanda LCD kuratidza inogona kuratidza magetsi kubatsira bhasiketi Kutenderera, Mileage, Tembiricha, Battery Kugona, Magetsi Power, Max Speed ​​etc. Uye yakanakisa mvura yekudzivirira dhizaini inoita kuti iite zvakare basa rakanaka mumvura. Chero data yemagetsi bhasikoro iwe waigona kuvaziva pachiratidziro.
Eletric inobatsira bhasikoro kushandisa 29 ″ * 2.35 gomo bhasikoro vhiri, rinova rakakura saizi vhiri uye rakasiyana vhiri tireyi yekutsika mapatani dhizaini inowedzera kukakavara kunatsiridza kubata mumugwagwa. Kunyangwe nzira yemakomo, mugwagwa weguta, mugwagwa wegiravhu kana mugwagwa wevhu, waigona kuzvibata nyore.
Kana iwe uchifarira mune akawanda emagetsi emagetsi emagetsi, shanya 48V magetsi montain bhasikoro, kupisa kutengesa gomo e-bhasikoro, 350W yakatarwa gomo magetsi emagetsi bhasiketi, 27.5-inch Bafang gomo.
Tags:magetsi kubatsira bhasikoro yemagetsi bike gomo revakuru
Prev: Full suspension electric mountain bike integrated wheel A6AH26-SM
Next: Electric kabhoni fiber bhasikoro 26-inch yakabatanidzwa vhiri A6CB26M